Fitsaram-pianakaviana | Law Firms Dubai
Lalàna silamo ao UAE
Ny lalàna momba ny toe-javatra manokana an'ny Sharia an'ny UAE dia manarona ny fanambadiana, fisaraham-panambadiana ary fifandimbiasana. Ny fandikana ny fitsipiky ny lalàna momba ny fianakaviana dia mifototra amin'ny Sharia, izay ampanaovin'ny Emirà Arabo Mitambatra ho fanamarinana voalohany amin'ny lalàna momba ny lalàna mifehy ny fianakaviana.
Fitsarana ho an'ny tena manokana (Dubai)
Address: 5th Street, Garhoud, Deira. Akaikin'ny trano lehibe RTA - Dubai.
Makani isa: 3427491952
Fandraisana mifandray amin'ny fitsaram-pianakaviana
Serivisy fanamarihana momba ny toe-javatra manokana
Nanomboka tamin'ny 2 ora maraina ka hatramin'ny 00:5 hariva.